सरकारी गाडीको चरम दुरुपयोगः नम्बर परिवर्तन गरेर सेता नम्बर प्लेटलाई प्राइभेट बनाएर प्रयोग ! - PUBLIC AAWAJ-पब्लिक आवाज
सरकारी गाडीको चरम दुरुपयोगः नम्बर परिवर्तन गरेर सेता नम्बर प्लेटलाई प्राइभेट बनाएर प्रयोग !
प्रकाशित : आइतबार, साउन १२, २०७६०९:३४ पब्लिक आवाज /संवाददाता
१२ साउन, काठमाडौँ । अदालतका स्रेस्तेदार र कर्मचारीले नै सरकारी गाडीको नम्बर परिवर्तन गरेर दुरुपयोग गरेको पाइएको छ । उनीहरूले सरकारले दिएको सेतो प्लेटको गाडीलाई रातो प्लेटमा परिवर्तन गरेर व्यक्तिगत तथा घरायसी काममा प्रयोग गरेको पाइएको हो ।
ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधीकरणले सरकारी गाडीलाई रातो प्लेट बा१७च ५७३८ नम्बर बनाएर चलाएको पाइएको छ । सो गाडी ऋण असुली न्यायाधीकरणका न्यायाधीश महेश थापाले प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
सो गाडी श्रम अदालतका स्रेस्तेदार जीवन भण्डारीले प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । सरकारी नम्बर प्लेटमा भएको भए ७ हजार कर तिरे पुग्नेमा प्राइभेट नम्बर बनाएकाले वार्षिक २२ हजार कर तिर्नुपर्नेछ । कर नतिरेका कारण गाडीको नवीकरण भएको छैन । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले लेखेका छन् ।
माछापोखरीमा डुबेको अवस्थामा बालकको शव फेला !
सवारी नियम उल्लङ्घन गर्ने पाँच हजार छ सय सवारी साधन कारवाहीमा